Warshadda Gaaska ee Hemp-ku-saleysan: Shirkadda Tamarta ee Faransiiska ayaa maal-gelisay ku dhowaad € 19 Milyan • Dawooyinka Inc.eu
Bilowga Faransiiska Qairos Energies ayaa sheegay inay ku maalgelin doonaan ku dhowaad 18,8 milyan oo doolar ($ 23 milyan) xarunta la qorsheeyey ee hemp-ka oo u rogi doonta hemp gudaha ka soo baxa haydrojiin iyo methane.
1 Pyrogasification loogu talagalay tamarta kuleylka ku dhisan
2 Helitaanka shabakadda tamarta
Ku saleysan Mareil-en-Champagne, Qairos wuxuu sheegay in wax soo saarka hydrogen loo rogi doono koronto unugyada shidaalka ee basaska iyo tareenada. Warshadda ayaa sidoo kale soo saari doonta methane-ka Gaz Réseau Distribution France, qeybiyaha gaaska dabiiciga ah ee Faransiiska iyo kan ugu weyn Yurub.
Pyrogasification loogu talagalay tamarta kuleylka ku dhisan
Xarunta, oo ku taal Trangé, oo u dhow Le Mans ee waqooyiga-galbeed ee Faransiiska, waxay ku saleysan tahay teknoolojiyadda loo yaqaan 'pyrogasification technology', oo lagu beddelayo koronto. Pyrogasification wuxuu ka kooban yahay biomass kululeynta heerkulka sare iyadoo ay jirto qaddar yar oo oksijiin ah, kaasoo u beddelaya maaddada gaaska isla mar ahaantaana soo saara CO2 iyo kuleyl. Nidaamka qashin-la'aanta ahi wuxuu baabi'iyaa daamurka ka dhasha hababka wax lagu sifeeyo qaarkood.
Pyrogasification loogu talagalay tamarta ku saleysan hemp (afb.)
Qairos wuxuu yiri waa deegaanka xagasha waxay ka iibsan doontaa meel 35-kiiloomitir gacan ka mid ah xarunteeda Trangé, iyadoo xubno ka ah Fermiers de Loué, iskaashato beeraha ah, oo bixisa biomass-ka. Shirkaddu waxay sameysay tijaabooyin hemp ah sannadka 2020 iyadoo qayb ka ah dejinta hannaanka warshadaynta iyo horumarinta. Qairos wuxuu sheegay inay aakhirka ubaahan doonto 1.000 hektar hemp hawlgal buuxa.
Helitaanka shabakadda tamarta
3.500 mitir murabac ah, xarunta sare ee 9 mitir waxay leedahay 15 mitir oo hawo sare ah iyo marinno, waxayna ku fadhidaa wadarta warshadaha oo gaaraya 23.000 mitir murabac ah. Ruqsadda dhismaha ee shirkadda iyo ruqsadaha kale ayaa u oggolaanaya inay ku shubto methane ka sameysan synthetic shabakadda tamarta ee Faransiiska.
Warshadu waxay lahaan doontaa awoodda ugu badan ee wax soo saar dhan 3,6 tan oo haydarojiin ah maalintii, laakiin shirkaddu waxay sheegtay in hadafkeedu yahay inay soo saarto qiyaastii 2 tan oo hydrogen ah maalintii iyo 200 mitir cubic oo methane ah. Qairos wuxuu sheegay in 25 ilaa 30 shaqaale looga baahan doono inay ka shaqeeyaan xarunta cusub.
Kévin Collet, oo ah agaasimaha isku xirka ee Qairos, ayaa sheegay in in kasta oo pyrogasification horeyba sifiican looga hirgaliyay Yurub, soo bandhigida hemp-ka oo lagu saleeyay silsiladda wax soosaarka ay tahay ikhtiraac.
Mashruucu wuxuu taageero ka helay bangiga maalgashiga Bpifrance iyo gobolka Pays de la Loire wuxuuna sii wadaa raadinta maalgalinta KPMG.
Ilaha waxaa ka mid ah Benzinga (EN), Xashiishadda Times (EN), HempSpot (EN), HempToday (EN)
Macaamiisha ayaa si isa soo taraysa ugu jeedinaya xashiishadda caafimaadka maskaxda iyo wax soo saarka
Daraasad cusub oo laga sameeyay Eaze, oo ah shirkad xashiishad ah oo fadhigeedu yahay California iyo suuqa, ayaa lagu ogaaday qaar soo baxaya…
Xashiishadda oo lagu beddelo opioids ka dhanka ah xanuunka daba-dheeraada
Cilmi-baaris cusub oo ka socota Jaamacadda British Columbia iyo Xarunta British Columbia ee Isticmaalka Maandooriyaha ...